Fotoam-panovana sy fiovana izao… | NewsMada
Fotoam-panovana sy fiovana izao…
Amin’izao, na iza na iza miteny ny amin’ny “Raharaha Ambohitrimanjaka”, samy milaza fa ilaina ny fifanatonana, ny fifampidinihana, ny fifampiraharahana, ny fifanarahana… Izy avokoa izany. Tsy misy mangidy toy ny sakay, hono, fa rehefa teny ierana: lany ihany. Mby aiza? Efa misy ny fifampiraharahana, mbola hitohy…
Ny mahavalalanina sy mahafanina, eo ny tsy fifankahazoan-dresaka. Zary lasa fifanenjanana sy fifanenjehana izany, fiandrasana kendry tohina, fitsikerana, fanomezan-tsiny… Tanàna tsy ilaozan’adala? Na misy hatrany ny mpanararaotra tsy mahita afa-tsy ny lafiratsin-javatra, mandranitra, manely tsaho, mampiady an-toerana…
Izay karazana fanararaotana izay no mitady hahazo laka? Ohatra ihany ny “Raharaha Ambohitrimanjaka” fa na inona na inona miseho sy atao amin’izao: tsy kely lalana amin’izay haharatsy endrika izany hatrany ny sasany? Tsy inona fa karazana fandemena, fanakorontanana… Izany no hoe fanoherana?
Rahoviana ny fanoherana vao hahasahiana sy hahavitana mamoaka izay tsara mampandroso lavitra no ho izay ataon’ny fitondrana? Na foto-kevitra, na vinam-piarahamonina, na fandaharanasa, na fomba fiasa, na fanatanterahana… Sao alaina raha avoaka izany nefa mbola tsy mahazo fahefam-panjakana hanaovana azy ny tena?
Tsy arahaba soa sy arahaba tsara ve izany? Izay hahasoa ny firenena sy ny vahoaka no atao, ary izay no mety hifidianana ny tena amin’ny fe-potoam-piasana manaraka: tena mikatsaka sy manolotra izay hampandroso ho amin’ny soa iombonana tokoa fa tsy faly mitsikera, manatsatso, manakivy, manakorontana…
Eo amin’ny fitondrana vao afa-manao zavatra ho an’ny firenena sy ny vahoaka ary ny taranaka ho avy? Eny, na tolo-kevitra ihany aza… Raha alain’ny hafa ny hevitra ny tena, mitady tsara lavitra no ho izany: izay no mampandroso hatrany… Tsy inona fa fifaninanana mandona hambompo amin’izay tena hahasoa.
Sao ny tsy fisian’izay no tsy mampisy fifampihainoana hatramin’izay? Fotoan’ny fanovana sy ny fiovana izao…